အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်ဆွဲယူ China Manufacturer
Home > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် > အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်ဆွဲယူ
ထွက်နိုင်ရေး: 6000 sets/year
လက်မှတ်: ISO9001 SGS CE
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်တံခါးကိုအဓိကအားသံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကို arc-shaped ဒီဇိုင်းတံခါးကို၏အပေါ်ဆုံးအဘို့မွေးစားနှင့်တံခါးကိုမော်ဒယ်အတွက်လှပသောဖြစ်ပြီး, ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်စုံစုံနှင့်ကြော့သည် ဖြစ်. , နှင့်ရှည်လျားသောကူးလှံတံတံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ကျစ်လျစ်ဖွဲ့စည်းပုံရှိကြောင်းသေချာသောမွေးစားဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုတာရှည်ခံတံခါးကိုအောင်အထောက်အပံ့ plunger နှင့်အတူနှစ်ဆလက်ဝါးကပ်တိုင်ဘားသို့အထူးမှိုမှတဆင့်ဂန္ထဝင်လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်တံခါး 2nd ပေါ်ကုမ္ပဏီ၏ဂန္ထုတ်ကုန်ရိုးရှင်းပြီးကြော့အသွင်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်တံခါးကိုရုပ်ရှင် 38 × 25 ကို အသုံးပြု. (အထူ 1mm) သံမဏိပြွန် အကြမ်းခံ။
ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်ဆွဲယူလျှပ်စစ် အလိုအလျောက်ဆွဲယူပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် သံမဏိပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်ဆွဲယူစက်ရုံ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်အဆောက်အဦးအပြင် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်လျှော ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်တိုးချဲ့ Moving လျှပ်စစ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ဂိတ်စျေးဆွဲယူ